Eeg Tilmaamahayaga Ogolaanshaha Degdegga ah »Jaamacadda Hodges
Kusoo dhawow Hawk Mustaqbalka!
Ku soo dhowow Hodges U! Waan ognahay doorashada inaad sii wadato waxbarashadaada inay tahay go'aan xiiso leh, oo sidoo kale ay ka buuxaan su'aalo. Iyada oo ay la socoto Hodges U, ayaanu kugu soo daboolnay.
Iskuduwayaashayada Aqoonsiga Kulliyadda ee takhasuska leh ayaa kaa caawin doona kaa caawinta inaad u dhaqaajiso dalabkaaga nidaamka oggolaanshaha. Haddii aad xiiseyneyso qalin-jabinta, shahaadada koowaad, ESL, ama Shahaadooyin, waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawinno inaad sida ugu badan uga hesho khibraddaada kulliyadda
Tallaabada Koowaad waa tan ugu Adag. Ku Bilow Safarkaaga Maanta.
Deg Deg Ah Aragtidayada Hab-
La hadal La Taliyahaada Ogolaanshaha Shaqsiyadeed.
Soo Gudbi Dukumintigaaga Taageera.
Ogolaanshaha, Jihaynta, iyo Diiwaangelinta. Adigu Halkaasaad Joogtaa!
Marabtaa inaad waxbadan kabarato talaabo kasta? Hoos waxaan kugula socon doonnaa geedi socodka oo dhan.
Tallaabada 1 - Gudbi Codsigaaga
Tallaabada ugu horreysa ee nidaamka oggolaanshaha waa inaad soo gudbiso arjigaaga. Tan waxaa lagu sameyn karaa internetka adoo soo gudbinaya dalab dhakhso ah ama adoo booqanaya xarunteena ku taal Fort Myers.
Tallaabada 2 - La Xiriir La Taliyahaaga Ogolaanshaha Ogolaanshaha
Haddii aad ku soo gudbiso arjigaaga degdegga ah khadka tooska ah, lataliyahaaga oggolaanshaha shaqsiyeed wuxuu kugula soo xiriiri doonaa taleefan, qoraal, iyo / ama emayl si aad u sameysato waqti aad ugala hadasho mustaqbalkaaga Hodges U. Wadahadalkan waxaa lagu qaban karaa taleefanka ama shaqsi ahaan kambaskayaga Fort Myers.
Ujeedada ka hadalka hordhaca ayaa ah inay kaa caawiso inaad go'aamiso haddii Jaamacadda Hodges ay tahay mid ku habboon baahiyahaaga tacliinta sare iyo in si wadajir ah loo dhiso waddo loo maro waxbarashaddaada Jaamacadda Hodges. Marka talaabadani dhamaato, waxaad heli doontaa casuumaad bartayada bulshada halkaas oo aad ku dhammaystiri doontid dalabkaaga shaqsiga ah, aad u gudbin doonto wixii dukumiinti ah ee loo baahdo, isla markaana aad bixiso lacagta dalabkaaga.
Haddii aad shaqsi ahaan ugu soo gudbiso arjigaaga xerada, talaabooyinka 1 iyo 2 waa la isku dari karaa.
Tallaabada 3 - Gudbi Dukumintigaaga
Dukumiintiyada lagama maarmaanka ah way ku kala duwanaan karaan iyadoo ku saleysan barnaamijkaaga xiisaha, taariikhda tacliinta, habka lacag bixinta, iyo xaaladda muwaadinnimo. Lataliyahaaga aqbalida ayaa kugu hagi doona dukumiintiyada loo baahan yahay.
Dukumiintiyada loo baahan yahay waxaa ka mid noqon kara:
Dukumiintiyada Gargaarka Dhaqaalaha
Ha ka welwelin inaan halkaa u joogno si aan kaaga caawinno habka dukumiintiyada. Waxaan u fududeyneynaa sida ugu macquulsan!
Tallaabada 4 iyo wixii ka dambeeya - Oggolaanshaha iyo Diiwaangelinta. Adigu Halkaasaad Joogtaa!
Markaad dhammaystirto nidaamka dalabka, waxaad heli doontaa go'aankaaga aqbalaadda maalmo gudahood. Waxaan kula soo xiriiri doonnaa si aan u dhammaystirno diiwaangelintaada, waxaadna si rasmi ah uga diiwaan geli doontaa Hodges U!
Geesi noqo Codso Maanta.
Nidaamyada Diiwaangelinta Gaarka ah
Barnaamijyada qaarkood waxay u baahan yihiin habraacyo isqoritaan gaar ah marka lagu daro talaabooyinka gelitaanka sare. Fadlan eeg bogagga hoose si aad u hesho macluumaad gaar ah ee barnaamijka.
BSN - Kalkaaliye caafimaad
Siyaasadaha iyo habraacyada Jaamacadda Hodges ee khuseeya Xuquuqda iyo Waajibaadka Ardayga iyo Cabashada Ardayga waxaa lagu daabacay Buug -gacmeedka Ardayga, kaas oo laga heli karo halkan.
Haddii ay dhacdo in ardaygu dareemo in cabashada aan si habboon loo maareeyn hay'addu, ardaygu wuxuu u gudbin karaa cabashadiisa ama xiriirkeeda gobolka soo socda:
Ardayda Waxbarashada Fogaanshaha ee Gobolka ka baxsan:
Habka cabashada ee ardayda waxbarashada fog ee ka baxsan gobolka ee ka qaybgalaya Heshiiska Dib-u-Celinta Oggolaanshaha Gobolka (SARA), oo dhammaystiray hannaanka cabashada hay'adaha gudaha iyo hannaanka cabashada gobolka ee khuseeya, waxay racfaan ka qaadan karaan cabashooyinka aan waxbaridda ahayn - FLSARAinfo@fldoe.org.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan habka cabashada, fadlan booqo Nidaamka Cabashada ee FL-SARA bogga internetka.